Hurukuro dzemusangano wevanyori dzichaitwa panguva yezviratidzwa zvemabhuku zveZimbabwe International Book Fair (ZIBF) zvichange zviriyo muHarare kubva musi wa5 Gumiguru 2013 dzichange dzichifamba nedingindira rinoti ‘kunyorera vana iye zvino’. Dingindira iri rindibata zvikuru nokuti pandinofamba ndichitsvakira mwanakomana wangu mabhuku ekuti adzidze kubva mukuona mifananidzo ndinoona mabhuku ezera rake andinona akanyorwa navanyori vekunze kweZimbabwe. Mifananidzo iri mumabhku acho ndeyezviwakwa nezvipuka zvekunze kweZimbabwe. Zvinorumbidzwa zvacho ndezveikoko zvakare. Pfungwa dzinobuda muzvinyorwa izvi ndedzekunobva zvinyorwa izvi. Hazvina hazvo kushata kuti vana vadzidzewo zvekune dzimwe nyika. Mazuva ano pasi rose zvarangova seruwa rumwe chete kuburikidza nokushandiswa kwedandira munyika zhinji dzepasi rino zvakanaka chose kuti vana vawane ruzivo netsika namagarriro evavakidzani muruwa urwu. Asizve zvinonzi zano pangwa une rako! Zvino vana vedu vanopangwa vasina kana nezano zvaro. P…
Musvondo yechipiri ndimo mandakazomuchaira runhare svondo yotondopera. Ndipowo Joromiyo paaninditi, “Shamwari handisati ndawana mari. Vanhu vandaifunga kuti vangandipa mari vanoti vachatoisa mari maakaundi yangu asi zvinotora mazuva akati kuti is…
Kutaura kwaJoromiyo vakomana navasikana imi! Hanzi, zvamunoparidza shoko muchiti munonamata madzimoni, ndiyani asingnamati madhimoni? Kereke dzamunonamatira dzine mazita adzo ndiana St John, St Peter, St Parick, ko varidzi vemazita iwaya vapenyu here? Ko iyo migwagwa yamunoshofera magarimoto enyu handiti akazara namazita avafi? Ndiyani asingazvizivi? Kana iyo midhuri yamunoshandira mahofisi enyu? Asingazivi kuti mazita acho ndeevafi ndiyani? Pedzezvo kana mava mumakereke motuka vamwe muchiti tonama madhimoni? Imi vanhu kwanai. Itai mushe? Nemiwo munonamata madhimoni. Joromiyo andifungisa kukereke mufundisi Mabhande vachiparidza shoko rokunamata mweya yesvina. ipapo vachikanda mavoko avo uko nekoko vachitambatamba kunge murwi wetsiva ari kugadzirira kukanda zvibhakera. Furo richipupuma namativi emuromo izvozvo uku mudzimai wavo akapfugama achinamata. Murume mukuru anenge achiyerera ziya izvozvo misodzi ichiyerera achituka mweya yemadzinza yose yevanasekuru, vana tete, nana mbuya vakafa …